Arimaha Diinta| Somaliland Newspaper In Somali & English
Thursday, 02 June 2011 17:23	Arimaha Diinta
Kusoo Dhawoow bogga Arimaha Diinta ee Shabakada Ramaasnews. Boggani waa bogga ugu qiimaha badan shabakada, waa bogga lagu soo bandhigo, lagu falanqeeyo lagagana jaahil baxo arimaha khuseeya diinta oo ay tahay inaynu mar walba hor marino. Waxad boggan noogu soo gudbin kartaan su'aalaha diiniga ah ee aad rabtaan in aad ka jaahil baxdaaan, qormooyinka diiniga ah iyo doodaha ku saabsan arimaha diinta la xidhiidha. Boggan waxa si gaar ah ugu xidhan culimo waawayn oo kamid ah culimada Soomaalida.
Nin Miskiin ah oo aan lacag ku lahaa ayaan ku idhi Sakaatul fidrigaygii u qaado lacagtii aan kugu lahaa. Taasi suurto gal ma tahay?
Bismilaah Alxamdulilaah; Sakaaatul fidriga waa taynu sheegnay ee aynu nidhi yaan lagu bixinin lacagtee raashinka ha lagu bixiyo. Markaa qofkii intuu lacagtii ka qaado dee raashin ha u siiyo oo dib ha ugu celiyo. Read More ...
Qofkii aan waxba haysan fidriga ma lagu leeyahay?
Bismilaah Alxamdulilaah; Waynu soo sheegno dee maalinkii ciida iyo habeenkaa, wax dheeraad ah waa inuu haystaa. Oo wax uu cuno wax ka dheeraad ah. Laakinse haddii isagii aanu waxba ba haysan labadaa, dee waa faqiirkan la leeyahay hala siiyo qofkii. Read More ...
Sonkorta Ma lagu bixin karaa Sakaatul Fidriga?
Bismilaahi Alxamdulilaah; Sonkorta Maya, sonkorta raashin ahaan baan loo isticmaaline waa faakihaysi oo iiyadu dee taashin ma noqotee waa sharaab uun weeye. Read More ...
Hadhuudh baan meel galbeedkaasi ah ka beertay. Warqad baan dirtay oo waxaan idhi hadhuudhkaa ka bixiya fidrigii la igu lahaa. Fidrigaasi sidaa ma igaga gudmayaa?
Bismilaah Alxamdulilaah; Kol haddii dee uu yahay hadhuudhku raashin hagaagsan oo dee kii ay cunayeen ah. Wixii ay beertaanbay dee kolay dadka beeralayda ahi cunaan. Kolkaa haddii reerkii hadhuudhka hayay uu yidhi bixiya. Dee way soconaysaa oo isagiina way ka soconaysaa. Maxaa yeelay dee sakadii xoolahaba inuu cid u diro sida caruurtiisa kuwa roonroon amma dadka masuuliyiinta ah inuu yidhaahdo inaga bixiya sakadii xoolaha way u banaanayd. Markaa sakaatul fidrigiina inuu yidhaahdo iyagoo reerkii raashinkii haya oo uu kayimi inuu yidhaahdo aniga iyo idinkaba inaga bixiya Sakaatul Fidriga intuu waraaq u qoro, dee wuxuubay noqonaysaa wakaalasho. Mar haddii isagii masuulka ahaa uu wakiishay dadkii uu ka bixin lahaa qaar kamid ah waa wax iska banaan. Xaaskuu wakiilan karaa, inamadiisa waa wayn, hablihiisa waawayn ayuu wakiilan karaa inuu yidhaahdo inaga bixiya. Markaa midaasi waa mid ka ansaxaysa.
Qofkii Ramadaan dhexdeeda dhintay miyaa fidri la igu yeelanayaa ?
Bismilaah Alxamdulilaah; Waxa shardi ah in laba qaybood oo wakhtiga kamid ah qofkani koobsado. Qayb Ramadaan ah iyo Qayb Ciida ah. Nabigu CSW waxa uu leeyahay bisha Ramadaan marka laga afurayo ayay waajibaysaa. Markaa haddii qofkii aanu ciidiiba soo gaadhin, rabadaan dhexdeediibuu dhintayoo, inaan lagu yeelanayn ayay tilmaamayaan Fuqahadu. Iyagoo xadiiska daliishanayaa, oo uu qofkuna dhintay Ramadaan Dhexdeeda oo aanu ciidiina soo gaadhin. Laakiin Ilmihii yaraa ee Ramadaan Aakhirkeeda dhashay oo kale dee way ku waajibaysaa sakaatul fidrigiisaa inuu ka bixiyo waa wajib. Read More ...
Fidrigii ayaan qaybiyay oo aan qaybna lacag ka dhigay qaybn raashin aan ka dhigay, sidaasi ma igaga baxayaa?
Bismilaah Alxamdulilaah; Haddii aad bixisay oo ay sidaas ku socota Ilaahay ha aqbalo. Haddii se aanad wali bixinin raashinimo uun u rog. Read More ...
Agoontii hanta yarawga ee walaalkaa dhalay ee aanad biil joogto ahna siin jirin fidrigaagii ma siin kartaa iyaga?
Bismilaah Alxamdulilaah ; Haddii ay xoolo leeyihiin agoontaasi oo ku filan, oo biil ugu filan, iyaga lama siinayo. Haddii se aanay wax ku filan haysan dee Foqoradii ayuunbay noqonayaan la siinayay. Wuxuun baana mar walba loo eegayaa baahiye ma jirtaa. Baahidaasi haddii ay jirto biil koodiina aan lagugu lahayn dee waad siin karaysaa. Read More ...
Dadka aan kula joogin ee meel fog kaa jira ma bixinaysaa fidrigooda?
Bismilaah Alxamdulilaah; Kuwa dibadaha jooga ee maqan, dee kolay haddii ay dad waawayn yihiin Nafaqadooda laguguma lehee way kaa baydhay kol haday dad masuuliyiin ah oo qaangaadh ah yihiin. Oo dee iyagay tahay inay shaqaystaan, dee haddii ay dad wax haysta yihiinna iyaga iska bixinaya. Waxaaba laga yaabaa dee inay adiga biilkiiba kuu soo tuurayaan. Marka inay adiga kaa bixiyaan oo aad uba wakaalato intaad fariin u dirto, oo aad tidhaahdo idinkaa wax hayee anigana iga bixiya idinkuna way banaantahay Read More ...
Dadka Fidriga laga bixinayaa maxay ka koobanyihiin, Ma caruurtaaduunbaa, ma caruurtaada iyo shaqaalahaa ma cida aad quudisaa, bal sheikh arintaa naga jaahil saar?
Bismilaah Alxamdulilaah ; Dadka laga bixinayo sakaatul Fidriga waa horta dadka aad biilinayso ee biilkoodu waajib kugu yahay sida Asalkii (Ubadkaagii iyo kuwii ay sii dhaleen) iyo Faracii ( Aabihii , hooyaddi, awoowyaashii iwm) iyo Walaalihii guriga kula joogay ee wax kula cunayay ee aad masuulka ka ahayd , kuwaas ayay tahay in sakadii laga bixiyo. Xaaskuna waa ku jirtaa. Read More ...
Sheek Maxamed Waalidku Ma Aabaha iyo Hooyada uunbaa mise awoowyaasha iyo Ayeeyyaaashuna way ku jiraan?
Bismilah Alxamdulilaah; Marka Waalid la leeyahay waxuunbay noqonayaan Aabihii, Hooyadii, Awoowgii, Ayeeyadii kuwaas oo dhami waa waalid. Read More ...
Dharka lagu xajiyo amma lagu cimraystaa ma waajib baa inay cadaan ahaadaan?
Bismilaah Alxamdulilaah; Jawaabta aan horaysiiyee waajib maaha laakin waa sune. Rasuulkuna SCW dharka cadcad kolay amaan dheeraad ah ayuu siinayay, ama ha ahaato qofkii dhintay oo lagu kafno, ama aha ahaato qofkii oo jumcadiiba u qaata, amma ciidii u qaata, ammaba dee ixraamkii u qaata. Waa iska sune ee waajib maaha. Cabdilaahi ibnu cabaas Radiya Laahu Canhu, waxa uu ka waramayaa Nabi Maxamed oo xidhanaya SCW camalkii, waxa uu leeyahay “ Rasuulku markii uu xajka xidhanayay iyo marka uu cumrada xidhanayaba, inta uu soo dhaqaaqo oo kolka horena uu isa sii diyaariyo uu sii feedho oo subag marsado ayuu labadiisaa go’na xidhan jiray. Idan Markaa dharka cadi wasakhduna had iyo jeer kuma soo gaban karto, oo dee markiiba way ka muuqanaysaa oo dee inuu qofkii markiba iska nadiifiyo ayay noqonaysaa. Sidaas daraadeed ayay qofkii dhintay sune u tahay oo kafanta lafteedu inay cadaato waajib maaha ee iyaduna wa iska sune. Walahu Aclam.	Read More ...
In qof ixraamtay, isla markaana ka ixraamtay Jidah isagoon kasii ixraaman magaaladii uu daganaa sida Hargeysa oo kale qofkaasi ma waxa lagu leeyahay Fidyo, mise ixraamkaasi uu Jidah ka dhex ixraamtay ayaa sax ah?
Bismilaah Alxamdulilaah; Waxa xajka iyo cumaraduba leeyahay miiqaat Samaani ( wakhti) ah iyo mid Makaani(meel) ah. Markaa miiqaadka Samaaniga ah ee cumradu wakhti walba wuu noqon karaa. Ilaa dee qofkaa xaajiga ah ee camalkii xajka ku jira ayuunbaan cumraysan karayn. Miiqaadka Makaaniga ahna, dee qofku markanu ahayn Ahlul xaram ee meelaha kale uu ka imanayo, meesha uu soo marayo inuu kasii xidho weeyaan. Qaybteenan kacbada hawdkasoo xigna waxaynu ka xidhanaynaa meel YALAMLAM la yidhaahdo oo ka sokaysa xaramka oo dee marka ay diyaaradu sii dul marayso qofka loo sheegayo. Haddii taasi uu kaba baqdo oo uu is yidhaahdo dee dadkani dad la rumaysan karo amaaha diyaarada wada amaba uu is yidhaahdo cid kuu sheegtaba ma helaysid. Dee jabuuti iyo Barbara iyo marka uu kasii duulayo inuu sii ixraamto weeye.
Laakin hadaba sidaas su’aasha ku jirta haddii uu qofku dhaafo miiqaad kii makaaniga ahaa, dhiigaasi waa lagu yeelanayaa oo fidya ayaa ku waajibaysaa inuu neef adhi ah qalo. Oo qofku waxyaabaja mukhaalafaadka ah ee uu samaynayo xajka dhexdiisa ayaa markaalaba iskugu jira. Inuu shay waajib ah ka tago iyo inuu shay rukni ah ka tago. Markaa arkaanta haddii uu mid ka tago dee cumardiisii Waxba kama jiraan bay noqonaysaa, tusaale ahaan ; Ixraamka, dawaafka, Sacyiga iyo Xalqiga. Inuu marka hore sii xidho, inuu dawaafo kacbada, iyo inuu inta u dhaxaysa SAFA iyo MARWA sacyi sameeyo iyo inuu marka timihii gaabiyo amma xiirto. Afarta weeye arkaanta cumaradu, cumardiisiina ma ansaxayso afartaa hadii uu mid ka tago. Laakin miiqaadka oo la xidho, oo macnaha miiqaadkii oo la dhaafo iyagu waajibaadkii ayay kamid noqonayaan, sidaas darted fidyo ayaa lagu yeelanayaa qofkii. Waxa laakin fidyadaasi ay kaga dhici karaysaa isagoo miiqaadkii kusoo noqdo, amaba miiqaad kale uu tago. Walaahu Aclam	Read More ...
3. Haddii Sheekh gabadhayda oo caado lahayd oo dhiigii xaydku ku yaalay oo wakhtigii dhiigaasi ku ooli laha dhamaado, hase ahaate aanay ka maydhan oo aanay ka dahaaro qaadan, ma banaantahay in loo galmoodo mise waa xaaraan? Maxamed Axmed Cali
Bismilaah Alxamdulilaah; Mar kale waxaan ku celin lahaa waxyaabaha maydhiga keena waxa kamid ah dhiigaa caadada iyo kaa dhalmada oo ruuxii dumarka aha ka go’a. Kolkaa marka uu ka go’o ee uu iska taago ee wakhtigiisu dhamaado, waxyaabaha aan u banaanayn waxa kamid ah ; inay tukataa uma banana, inuu ninkeedu u galmoodaana uma banana jeer oo ay maydhato. Maydhi ayay ku xidhanyhiin. Idan markaa dhiigii waa inuu go’aana kana maydhataana. Waxaynu ka fahmaynaa aayadan “ Dumarkii ha u dhawaanina marka ay caadada leeyihiin, Ilaa uu ka go’ayo, oo ay ka dahaaro qaadanayso.” Macnaha ay bixinaysaa waxa weeyan carabi ahaan, marka ay ka maydhaan. Markaa Ilaahay baaba cadeeyayba. Markaa si nadaafadii kaamil u noqoto oo u buuxsanto waa in uu go’aa dabadeed ruuxii dumar ahayd ka maydhataa.
Waliba sida uu rasuulku ku talinayay SCW e , meelihii dhiigu maray cadar udgoon iyo intay miski mariso inay maro mariso oo kusii xoqdo oo ku nadiifiso si markaa arinti u dhamaystiranto. Midhka markaa aynu kusoo ururinaynaa waxa weeye , waa daruuri, waajib baanay tahay inay maydhato wakhtigaasaanu u tagi karaa. Saxaabiyad ala odhan jiray Farima Bintu Xubaysh, markuu rasuulku la hadlayay SCW iyadoo uu kala talinayay dhiigaas dhabar furanka ah iyo ka caadada iyo habka ay cibaadada u gudan lahayd, waxa uu laha rasuulku “ Intaad maydhato marka uu xaydku kaa go’o dabadeedna tuko” Markaa sidaasay isku daba soconayaa, xadiiskaas oo Mutafaqu calayhi ah. Markaa waxkaamtan ninkan Su’aalihiis danbe ay u badan yihiin ee u saabsan dadku siday u dahaaro qaadanayaan, ioyo labada qof ee sawjaynka ah habka ay u wada noolaanayaan waa mid muhiim ah inay ruuxii dumarka ahayd wax ka ogaato ninkiina wax uu ka ogaado si xaraam aanay ugu dhicin, anshax xumo iyo edeb darona aanay runtii u imanin. Islaamka habka wanaagsan ee uu u dhigayna dee loo raaco. Walaahu Aclam	Read More ...
2. Waxa dhacda buu yidhi Sheekh sawjadaydii oo iga maqan amaba aan ila joogin inaan xusuusto amaba aan ku riyoodo ayna dhacdo inay halkaasi biyihii iga yimaadaan ama anigoo sidaasi u xusuustay inaanay waxba iga iman aan sae dareemo anigoo u galmoonaya. Ma
Bismilaah Alxamdulilaah: Qofka waxyaabaha inuu maydho waajib kaga dhiga waxa kamid ah iyadoo manidu ay kazoo baxdo, taa ay Soomaalidu u taqaano shahwada ee qofka binu aadamka ahi ka abuurmo. Amma hakaga soo baxdo isagoo soo jeeda amah aka soo baxdo isagoo hurda, qofkay kazoo baxaysaa qof dhadig ha ahaado amma qof lab ha ahaado, ileen dumarka laftoodii way leeyihiin manidaase. Marka ay kazoo baxayso waxa shardi ah inay iyadoo dareen u samaynayso “bil shahwa” ay kazoo baxdo, haddii ay sidaas uga soo baxdo waxa waajib ku ah inuu maydho. Oo waxyaabihii maydhiga keenayay ee waajibka ka dhigayay bay tahay. Waxaana u daliila xadiis saxeexa oo muslim ku sugan oo Nabigu CSW laha “ Biyaha lagu maydhanayo waxa sababaya biyaha qofka ka imanaya”. Saxaabiyada la yidhaahdo Ummu Sulaym baa Nabiga u timi CSW, su’aal bay waydiisay markaa dumarku laga yaabo badan koodu inay ka xishoodaan laakin gogol dhig bay u samaysay iyo afeef , markaasay lahayd “ Nabi Maxamedow waan ku su’aalayaaye Ilaahay kama xishoodo shayga xaqa ah ee waa cadeeyaaye, midhkan aan soo wadaana waa shay xaqa oo aan rabo inaad iga caafimaadiso. Ruuxii dumar ahayd marka ay habeenkii ku riyooto Jimaac iyo galmo miyaa lagu leeyahay maydhi, maydhasho ma ku waajibaysaa”.
Nabigu waxa uu ugu jawaabay CSW isagoo dee xaqa cadaynaya , isagoo aan afka ka qarsan oo xagaa nooga baydh aan odhanin “ Haa oo maydhigi wuu ku waajibayaa kol haddii ay biyo aragtay” Bukhaari iyo Muslim baa xadiiskaa wariyay. Markaas midka shardiga ahi waa imaatinka biyaha. Waxyaabahan soo socdaa marka ay qofkii ku dhacaan isaga maydhi kuma waajibayo, 1. Marka ay biyihi kazoo baxaan isagoo wax dareen ah aan u samaynaynin,
2. Qofkii marka uu ku riyoodo inu galmo iyo wax samaynayay laakin biyo aanu arag sidaynu xadiiskaa hore ka fahanay, 3. Ninkiii oo kale marka uu wixii isku celiyo ee aan waxba ka imanin. Kolayba se ka xusidiisa mudani waxa weyaan marka ninkii iyo gabadhii dee isu tagaan ee kulmaan, wax ha sameeyeen hase yeeshee aanay waxba ka imanin waxa lagu leeyahay maydhi, sida xadiiska muslim ku sugani tilmaamayo “ Kol haday ninkii iyo afadii kulmaan biyoba yaya ka imanin, laakin inay maydhaan weeye. Islaamkuna nadaafaduu ku dadaalayaa. Qofku maraaxilka noocan oo kale ah qofka dheecaamo iyo dhididyo ayaa ka imanaya, is badal baa jidhkiisii ku dhacaya, sidaas darted dee inuu nadaafad qaato si aan dadkii waxba ugaga soo ururin waa runtii mid muhiim ah. Markaas jawaabtii hadaynu soo koobno, hadii biyo kaa yimaadeen waa lagugu leeyahay maydhigii, hadaan biyo kaa imana laguguma leh, Walaahi Aclam.	Read More ...
1.	Haddii Sheekh gabadhaydu ay umusho oo ay ku jirto afartankii dhiigii dhalmada ee nifaaska ahaana uu ku yaalo ammase aanu wali ka go’inba, dabadeed aan kalgacal dartii dhunkado aanse wax galmooda u yeelan niyadana aanay igaga jirin. Arintaasi dhunkashad
Bismilaah Alxamdulilaah: Islaamku kolay dhinacyada kala duwan sida dadku u wada noolaanayan waa ka waramay wixii xalaal ah iyo wixii xaaraan ah. Waxa kale oo uu kasii waramay xuquuqda ay isku leeyihiin labada sawj iyo habka ay u wada noolaan lahaayeen iyo wixii iskaga banaan iyo wixii kale. Masalada lafteeda hadaynu usoo noqono inagoo isku duuduubayna shayga la yidhaah dhiiga caadada iyo dhalmada oo midna la yidhaahdo Xayd midna Nifaas isku xukun bay noqonayaan sidaas darted jawaabtooduna isku mid bay noqonaysaa. Wakhtiigii hore waxa jirayay oo ay caado u lahaayeen nimankii Yahuuda ahaa ee madiina daganaa, ruuxa dumarka ah markay caadadu ka timaado inaanay waxna la cunin gurigana kula kulmin oo ay ka fogaadaanba. Markaas asxaabtu Rasuulka waxbay ka waydiiyeen arintan. Dumarkan iyaga ah ee la karantiimaynayo ee laga durkayo. Intaan Nabiguba CSW ka jawaabin ayaa Ilaahay ka jawaabayaa “ Dhiigaa caadada ah ayay ku waydiinayaan, waxaad u sheegtaa inuu yahay dhib, dumarkana iska ilaaliya inta ay caadada leeyihiin oo ha u galmoonina” Markaasuu rasuulku fasiray CSW, waxaanu yidhi, wax kasta waa samayn kartaan oo aan galmo ka ahayn. Ruuxii dumarka ahayd waad dhunkan kartaa, la kaftami karaa, kusoo dhawaan karaa, laseexan karaa laakin galmada ayuunbaa la diiday. Amma dhiigaas caadada ha lahaato amma ka dhalmada. Ninka Mafruuq la yidhaahdaa waxa uu su’aal waydiinayaa Caaisha oo climigeedu uu aad u badnaa, ina Abubakar Sidiiq oo NABIGA xaaskiisii ahayd
Ninka maxaa ugu banaan xaaskiisa, caaisha haddii aad tahay inuu xaaskiisa sideebuu ula dhaqmi karaa markay caado leedahay. Wuxuu ula dhaqmikaraa bay tidhi, macaamalo walba way dhex mari kartaa aan ahayn galmada. Markaa ruuxii dumarka ahayd ee dhiiga dhalmada lahaydna taas uunbay lamid noqonaysaa, midhka la diidayna waa galmada. Laakiin haday dhacdo qofkii inaanu is hanan karayn oo uu hore halkaa uga sii socdo, dee inuu kolayba iska daayo oo si aanu xaaraan ugu dhicin isagoo dadaalaya, midh meesha ku jira weeyaan	Read More ...
Waxaan daganahay Hargeysa, waxaa uu yidhi waxaan rabaa in la iga jaahil saaro, maxay diintu ka qabtaa dhaxal la wada lahaa oo rag iyo dumar la wada lahaa oo mid kamid ah raga dhaxal kaas lahi guursaday oo xoolihii oo aan la qaybin badh laga siiyay shareec
Bismilaah Alxamdulilaah; Dhaxalka waxa ku xadgudbi jiray wakhtigii hore Islaamka ka hor Jaahiliyada ka hor oo wuxuunbay odhan jireen dhaxalka wuxuunba wax ku leh raga xooga leh ee dagaalami kara haddii xoolaha lasoo weeraro. Markaas dumarkan iyo caruurtan iyo maatidii haddii aanay dagaalka ka qayb galahayn oo waxba aanay tarahayn yay dheeftiina waxa ku yeelanin waana qiyaas faasid ah. Sidaas darted ayuu Qur’aanku ku eedeynayay “ Dhaxalka aadbaa u cuntaan aduunyadana aad baa u jeceshihiin “. Nabiguna CSW waxa uu ka warbixinayay In arinkii is badalay dhaqankii Jaahiliyada ee liitayna meesha uu ka baxay sidaas darted aanay suuroobayn banaanayna qofna inuu ku xad gudbo qof kale xaqiisii, Markaasuu waxa uulahaa “ Waar Qof walawba ogoow Ilaahay waa uu siiyay qof walba rag iyo dumar, xaqiisii ayuu u cayimay oo uu siiyay,sidaas darted xataa dardaarankii ayuu Nabigu CSW xidhay Ileen wakhtiigi hore dardaaran ayuunbaa jiray ee dhaxal ma jirin. Se markii dhaxalka ay Aayaduhu ka warameen ee Suuratul Nisaa ku sugan sida aayada 11 iyo 12, Qof waliba xaqiisaas uun ha qaato oo dardaarankiina waxba kuma yeelanayo qofkii oo waa ka xidhmayaa.
Mar kale Nabigu CSW waxa uu ku lahaa “ Faraaidka qof walba inta uu Ilaahay u cayimay siiya wixii soo baaqi garoobana waxa qaadanaya Tolka ugu dhaw amma ka ugu xigtaysan, markaas dadku sidaasay u kala leeyihiin buu laha Nabigu CSW “ Inagoo hadaba Nusuustaasi tix galinaya waxa haboon inaynu noqonaa dad mar walba baadigooba shay xalaal ah, aduunyo nha raadiyo hase ahaatee shay xalaal ah ayuu raadinayaa goor walba. Caadadan inagu aynu isticmaalo amma Su’aashani habka ay u dhacayso wixi la odhan jiray Yabadhka oo reerkii wlaiba baadiyaha ayay iska badantahay, siday xooluhu iskugu jiran aya waxa la samaynayaa ninbaa guursanaya caruurtii kamid ah, dabadeed in waa lagu yabdhayaa isaga oo qayb loo jraa bay noqonaysaa oo uu iska isticmaalo xoolihii dhaxalka ahaa ina wuu ka yarad bixinayaa oo dee cidii uu ka guursaday ayuu siinayaa, idan markaasaa la odhanayaa ninkaa hebel isagu wuu gaasa-baxay oo dee intiisii goosay weeye, kii labaad ayaa guursanaya, kii saddexaad ayaa isna guursanaya. Markaa waxa dhacaya in xoolihii uun raggi iskugu biyo shubtaan. Hooyadii iyo hablihiina halkan bay iyagu soo taaganyihiin oo yabadhna lama siinin yaradna iyaga lagama bixin arinkoodii. Markaas midhka meesha ku jiraa waxa weeyi in horta wixii la qaybiyo oo sifadii sharciga ahayd loo qaybiyo. Markaas haday doonayaan hablaha iyo hooyooyinku iyagu haba siiyeen inamadii oo haku soo celiyeene, laakiin Islaamku wixii uu siiyay ee Qur’aanka dhexdiisa uu ugu qadaray horta in la siiyaa midhka meesha ku jira weeye. Haddii kale oo aanay taasi dhicin dee Jaahiliyadaa carbeed faldanbiyeedkaas ay samayn jireen ayuunbay noqonaysaa dulmina way noqonaysaa. Markaa in wixii la xalaaleeyo xoolihiina loo quudho dadka maatida ah ileen Ilaahay baa siiyaye. Oo Markii horeba Xoolahan Ilaahay ayaa bixiyay kii amaanada uu ugu dhiibayna waakan ka dilay, idinkii kusoo hadhayna inaad dulmi ku qaadataan maaha. Markaas waxa weeye sida adiladaas aynu soo aragnay ay ka waramayso waa inuu qofku xaqiisuun ku eekaado wixii kale ee uu qaadanayaana in wax uun la siiyay uu ku eekaado weeye.
Sh. Maxamed Sh. Cumar Dirir	Read More ...
Sheekh Masuuliyiin Dawladeed marka xil loo magacaabayo waa la dhaariyaa, mudadii ay hayeen hadii ay dhamaato oo looga maarmi waayo in mudo loo kordhiyo intay doontaba ha ahaatee. Sidaasi dabadeed loogu kordhiyo, ma dhaar danbe ayay u baahan yihiin mise s
Shaygan la yidhaah dhaartee ee qofka masuul ka ah la dhaarinayo amaba markhaatiga la dhaarinayo, mashruucba maba ah, masuulka dhaarba laguma lahaba. Masuulka Islaamku waxa uu shardi uga dhigay inuu yahay qof miyir qaba oo aynu uga jeedno inuu yahay qof diin iyo amaano iyo Iimaan leh oo xilkii lagu aamini karo oo Iimaankiisu celinayo. Kol hadii qofkaas Iimaankiisa iyo Cadaaladiisa lagu kalsoonyahay, masuuliyada waa loo dhiibayaa ee loo ma talo saaranayo kitaab uu baalaha gooyo oo uu ku dhaarto.
Anigoo ah ardayda dhigata jaamacadaha dalka, waxaan qabaa su’aal aan rabo inuu sheekhu iga jaahil saaro, diinta Islaamku maxay ka qabtaa adigoo fadhiya meel u dhaw laamiga, haddii dhagax yaala laamada dhexdeeda shaagu uu soo tuuro oo uu waxyeelo keeno am
Sideedaba waxa jira haddii qofka ficil uu ka yimado marna wuu u kasaa marna uma kasee oo Khada’ buu noqdaa. Mar waa lagu yeesha ficilka marka uu khada’a yahay marna laguma yeesho. Xaaladaha noocaas oo kale ah wixi dhacaa mar waxa uu ku dhacaa sabab, marna waxa uu ku dhacaa mubaashara . Qofkoo ficilkii sabab ula yimaada amma ficilkii gacanba saaraba.
Sheekh anigoo tukanaya salaada kuna tukanaya masjid ayay waysadi iga jabtay, hadii aan ka bixi lahaa salaadana meel aan maro waan waayay oo safaf badan ayaa iga horeeyay kuwo kalena way iga danbeeyeen oo dadkii tukanayay inaan hor marana way igu adkaatay
Hadii aqoonyii salaadu jiri lahayd mushkiladana kula soo gudboonaatay sidii loo xalinayo waad garan lahayd. Waxa uu suneeyay Rasuulk SCW marka qofka taas oo kale ku timaado, waxa haboon inuu sanka qabsado isagoo u muujinaya inuu sanbooray oo kale. Kadibna dibada u baxo hawshiisiina iska soo dhamaysto. Dadkii xaman lahaa ee odhan lahaa waa xejin waayay ee xaman lahaana way ka hakanayaan oo arinkisii waaa u asturanayahay. Islam markaana dee cibaadadiisi wuu usoo dahaaro qaadanayaa.
Sheekh Haddii maryaha candhuufi iga duusho balse aan garan waayo meesha ay igaga dhacday, dabadeedna aan sidaasi salaadii ku tukado, candhuuftaasi ma noqonaysaa mid najaas ah oo jabinaysa salaada? Jawaab: Marka hore candhuuftu waa daahir, oo nijaas maaha. Meelkastaba ha ku dhacdo waa daahir. Waatan aynu liqayno sharaabkaynu cabayno inoo ah oo aynu jidiinkeena ku qoynayno. Marka Mushkiladaad dareentay ma jirto. Waxase mushkilad ah aqoon darada aad salaada u leedahay ee aad kala garan wayday wixi nijaas ahaa ee jabaninayay iyo wixii aan nijaas ahayn, mar se ahadaad tukanayso waa Alxamdulilaah. Read More ...
Last modified on Wednesday, 27 July 2011 17:50	Read 10538 times	|
Maanso: “Odaygaa Ninkii Qaban Lahaa U Ololaynaayo”
Tix Maanso: “Wakhtigaa Is Caabiya”
Magacaabista Guddoomiyaha Maxkamadda sare: Maslaxad Qaran mise Murraad Gaar ah?: Saleebaan Kalshaale
“18-ka May Maalin Ku Xusan Quluubta Dadka Reer Somaliland” Xamda Xaashi
Dawlada Sheekh Shariif Oo Mar Kale Sheegtay In Ay Mamnuucday Baasaaboorkii Hore Ee Soomaaliya. »
Dhaqaale	Dhulgariir	Khilaafka Xisbiga UCID	Sheekh Shariif	Copyrights © 2011 Ramaas News. All Rights Reserved. We have 1549 guests online